July Dream: My favorite cartoon movie
အင်း. ကလေးစိတ် မကုန်သေးဘူးဘဲ ကိုး။
တွမ် အင် ဂျယ်လီဘဲ သိပါတယ်။ ဗဟုသုတ ခေါင်းပါးကြောင်းဝန်ခံသွားပါသည်။
ကျောင်းက လူတွေပဲ Tag တော့မယ်ဗျာ။
အစ်မကလည်း... ကလေးစိတ်က ဘယ်ကုန်မလဲဗျ။ ဒါကြောင့်လည်း အခုလို နုပျိုနေတာပေါ့။ မနာလို မရှိနဲ့နော်။ ဟဟ... :P
မုလန်ကို မျက်မှန် တပ်ထားသလိုပဲ ဆိုတော့ ရွှန်းတီရေ... Tag ထားတယ်နော်။ အချိန်ရရင် ရေးထားပေးအုံး။
22 Nov 08, 23:53
kom: တကယ် မသိလို့ ခွင်္င့လွတ်ပါ။ သိရင် ရေးပါတယ။် ပြောပြီးပြီလေ.ကြောင်ကလေးနဲ့ ကြွက်ဘဲသိပါတတယ် ဆို့...ရွန်းမီ ကို မေးကြည့် သူလဲ ကလေးစိတ် မကုန်တဲ့ အထဲမှာပါတယ်။
ကွန်မက်မဖတ်ဘဲ ကိုယ်ရေးချင်တာ အရင်ရေးပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ရွန်းမီက ရောက်ပြီးသွားပြီ။ အစ်မပြောတာ မှန်ပါတယ်။. လူမှန် ကို အစ်မကရွေးပေးထားတာပါ။။ :P
ဟုတ်ပ အစ်မ KOM ရေ...
ကျွန်တော်က Tag ရင် အရင်မေးတယ် ခင်ဗျ။ ရေးပေးမယ် ဆိုတဲ့သူတွေကိုပဲ စာရင်းထဲမှာ ဖြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်က ရေးခိုင်းလိုက်ပြီး သူတို့က မအားတဲ့အခါ အကြွေးတစ်ခုလို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ ခွဲခြားတဲ့ သဘောတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သေသေချာချာ ဂရုတစိုက်ရေးပေးထားလို့ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် .. (ဂုဏ်ပုဒ်တွေအကုန် ဖော်ထားတဲ့အတွက်ကတော့ နောက်မှ ရန်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့ :(
ကျွန်တော်က ကိုယ်လုပ်ပေးရမယ့် အရာတစ်ခုကို အဲဒီလိုပဲ ဂရုတစိုက် လုပ်ပေးတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်ဆို ပိုပြီး အသေးစိတ် သွားတာပေါ့။ ကြုံတုန်း ကြွားတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ဗျာ။ အဟက်... (အဲဒီလိုပဲ တခါတလေ အချိုးက မပြေဘူး)
ကာတွန်းကြိုက်တတ်တာ တူတတ်ရန်ကော.. တူရန်ကောကွယ်... အဲလိုလူမျိုးတွေစုပြီး .. မြန်မာကာတွန်းကားကောင်းကောင်းလေး ဖန်တီးရရင် မကောင်းဘူးလားကွဲ့ အေတို့ရဲ့.....ဟိ။
ဟဟဟ။ ဘယ်သူများလည်းမှတ်တယ်။ မတူးတူးသာ လက်ချက်ကိုးဗျ။ အဟဟ
ိကိုယ်လည်း အဲဒီ မူလန် ကို ကြိုက်တယ်
ကာတွန်းကား ကြိုက်တဲ့လူတွေ တယ်များနေပါလား
လူပေါင်းမှားမယ်နော်။ ကာတွန်းကား ထွက်မလာပဲ ကာတွန်းကားတွေပဲ ကြည့်ဖြစ်ကုန်ရင် ဒုက္ခလေ။
သေချာတာပေါ့။ ရှင်ဗျူးသာ လက်ချက်ပါပဲဗျာ။
ပါဝါရိန်းဂျားတွေ ကြည့် စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ပြီး လက်ထက်က ကင်မရာကြီးကို လောင်ချာ မှတ်ပြီး လေယာဉ်တွေကို ပစ်မချနဲ့အုံးနော်။ အဟဲ...
အဲဒီကားလေးက ကောင်းတော့ လူကြိုက်များမှာ သေချာတယ် ခင်ဗျ။
ကာတွန်းကားတွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက ခုထိသိပ်ကြိုက်တယ်။ 99 လောက်မှာထွက်တဲ့ Tarzan ခဏခဏကိုပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Prince of Egypt, ခုနောက်ပိုင်းတော့ 05 ကထွက်တဲ့ Robot ကို တော်တော်ကြိုက်လို့မဆုံးဖြစ်နေတော့တယ်။ အရုပ်ကလေးတွေလို့ကိုမထင်ရဘဲ အရမ်းကို အသက်ဝင်လွန်းလို့ဗျာ။ Toy Story, Bug Life တို့တော့သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ကာတွန်းကားနဲ့မတူဘူးဘဲ အရမ်း animation ဆန်တယ်လို့ထင်လို့။ စကားမစပ် ကာတွန်းကားတွေရဲ့ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေလည်းအတော်ပေါက်ကြတယ်နော်။ Circle of Life, When you believe, COlour of the Wind, You be in my heart,
ကျွန်တော် မုလန်ဇာတ်ကားလေးကို သဘောကျတယ်၊ အမြင်တူတယ်ဗျ၊ ကျွန်တော်လည်း အတက်ခံရတယ်လေ၊ အခု ကိုဂျူလိုင်ရေးထားတာလေးကို အတော်လေး သဘောကျသွားတယ်၊ ကာတွန်းဆိုကျွန်တော်က အသေကြိုက်လေ ... ။
အင်း.. ခုနောက်ပိုင်းမှာ လူနဲ့ရိုက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို တချို့ကာတွန်းကားတွေနဲ့ ထွက်နေပြီ.. ဟိုနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ပြောဖြစ်တယ်.. ခုခေတ်ကာတွန်းကားတွေက ကလေးတွေအတွက်သက်သက်မဟုတ်တော့ဘူး.. လူကြီးတွေအတွက်ဖြစ်လာပြီလို့.. ဥပမာ.. Wall-E , Cars, The Spirit, etc..
မဗေဒါလဲ မူလန်ကာတွန်းကိုကြိုက်လို့.. အပိုင်တောင်ဝယ်ထားတယ်.. စလုံးရောက်တော့ ကျောင်းမှာ ပေါင်းမိတဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းနာမည်ကလဲ မုလန်တဲ့.. First name ကတော့ မု ... ကိုဂျူလိုင်ရှာထားတဲ့ ကာတွန်းကားပုံလေးတွေက လှတယ်.. တော်တော် အားစိုက်ထုတ်အပင်ပန်းခံထားတဲ့ ပိုစ့်ဆိုတာသေချာပါတယ်.. မဗေဒါအကြိုက်ဆုံး ကာတွန်းကားတွေက စင်ဒရဲလား.. Mulan.. The Spirit (very nice songs).. The Prince of Egypt.. and many more...
"မူလန်" ဆိုတာမူးရင်လန် လန်လာလို့လား ဟင်၊မသိလို့မေးပါတယ်။
မောင် ရေ... ( အမလေး လျှာယားလိုက်တာ)
ကျွန်တော်ကတော့ ရုပ်ပုံလေးတွေ လှတဲ့ ကာတွန်းကား အတော်များများကို ကြိုက်ပါတယ်။ Bug life က မဆိုးပါဘူး ခင်ဗျ။ ကာတွန်းနဲ့ တူပါသေးတယ်။
ကျွန်တော် ရေးထားတာကို ရှည်လှပြီ ထင်နေတယ်။ အိမ်မက်ရှင်ရဲ့ ပို့စ်ကို သွားဖတ်မိမှ ကိုယ့်ပို့စ်ထက် ရှည်အောင် ရေးထားတဲ့ သူရှိနေမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် စာရှည်သွားလို့ ဖတ်ရတာ များသွားမှာကို အားမနာတော့ဘူး ဗျာ။
ကာတွန်းကားတွေက ကလေးတွေ အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးမဟုတ် လူကြီးမရောက် ကျွန်တော်တို့လည်း ကာလသားတွေ အတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ် လာပုံပဲနော်။
မုလန်က တရုတ်ပြည်က ဇာတ်ကောင်မို့လို့ ဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ထားတယ်လေကွယ်။ စကပ် ၀တ်ရင်လည်း ဂါဝန်လို အရှည်ကြီးတွေ ၀တ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သိပ်ပြီး မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ အခန့်မသင့်ရင် နဂါးလေး မူရှူးရဲ့ မီးမှုတ်ချက်အောက်မှာ ရှိသမျှ အမွှေးတွေ တက်တက်ပြောင်သွားမယ်။ သတိပေး ထားတာပါဗျာ။
အိ အိ..."Warning" ကြီးကလဲကြောက်စရာကြီး၊တဆုံးပဲ။
ကျတော်တော့ ကွန်ဖူးပန်ဒါကတော့ ဇာတ်လမ်းအသစ်ဖြစ်သွားတယ်။
finally, I did it! :-)